Kismaayo News » Qarixii Muqdisho, tirada dhimashada oo korortay
Kn: Siihayaha xilka taliyaha Booliska qaranka Soomaaliya, Gen. Maxamed Xuseen Afrax oo saxaafadda u soo bandhigay khasaarihii ka dhashay qaran saaka lala eegtay dugsiga tababarada ciidamada booliska ee Kaahiye ayaa ka warbixiyay tirada khasaaraha iyo qaabka weerarku u dhacay.
Afrax wuxuu sheegay in 18 askari ay ku dhinteen qaraxa, tiro intaasi le’egna ay ku dhaawacantay kadib markii sida uu sheegay uu xerada ku dhex qarxay qof ku soo dhex dhuuntay ciidamada booliska oo isu diyaarinayay inay dhigaan bandhig tijaabeed at ugu diyaargaroobayaan munaasabadda bari.
Sargaalku ma faahfaahin qaabka uu ninka isqarxiyay ku soo galay xerada iyo cidda u fududaysay maadaama afaafka hore ee xerada si adag loogu baaro dadka gudaha u galaya. Sida ay aaminsanyihiin dadka qaar, dadka goobta lagu xareeyay ma wada ahayn ciidamo ka tirsan booliska ee waxaa ku jiray qaar magaalada laga soo uruuriyay si munaasabadda loogu moodo, waana halkaasi meesha ay ka timid habacsanaanta dhinaca amaanka, waxayna sahashay in Shabaabku si dhibyar u soo dhex galaan xerada.
Ciidamada booliska oo kaliya ma aha ee sidoo kale ciidamada milatariga ayay u diiwaan gashanyihiin boqolaal ay saraakiisha ciidanku mushaarkooda ku qaataan magacyadooda, laakiin aan dhab ahaan u jirin. Waxay u muuqataa in qaranku dhinac kasta ka dhiigbaxayo, ayna yartahay dadka lahaanshaha iyo lexojeclada muujinaya.